admin February 6, 2019 प्रविधि 0
अत नेपाल पानि यौटा कृषी प्रधान देस र यांहाका अधिकाम्स मानिसहरु कृषी तथा पशुपालन पेसामा आबद्द रहेका छन् । तर उचित प्रविधीको अभावमा अत्यन्तै न्युन उत्पादन एवं लागत पनि बढी भएको कारण आजका कृषकहरु कृषी तथा पशुपालन पेशाबाट बिमुख वा निरास भएको पईन्छ । आज हामी यस्तो भिडियो प्रस्तुत गर्दै छौ जसले पशुपालन प्रणालीमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यस्तो प्रबिधीले कम लागत एवं छोटो समयमा बढी उत्पादन दिनुको साथै ब्यबसाहिक पशुपालन लगानी गर्न प्रेरित समेत गर्ने छ । यो भिडियोले विकशित राष्ट्रमा हुने पशुपालन प्रणालीलाई देखाएको छ । जसले आम जन-मानसमा थोरै भएपनी उपयोगी जानकारी प्रधान गर्ने छ । पुरा भिडियो हेर्नुहोला…….
बुवालाई दागबत्ती दिनुअघि अनिशले सोधे : बाबालाई पोल्छ के…, किन जलाउने ?
विवाह भएको १२ वर्षपछि सम्म पनि यौन सम्पर्क नगर्ने दम्पत्ती, कारण सुन्दै अनौठो
ल हेर्नुस्ः नेपालमै जमिन मुनिकाे ग्याँस बालेर देखाए यी युवाले… यसरी फ्रिमा ग्याँस बाल्दै पकाउँछन् खाना (भिडियो सहित)